Omar Sayid Abdilahi: 2016
Bishu markay ahayd 27/12/2016 waxaa wasaarad ahaanu aan u qabanay shir wayniii Shaqaalaha Madaarka caasimada ee Sanadlaha ahaa, Waxa ka soo qayb galay madaxda wasaarada oo wasiirku hor kacayo iyo dhamaan shaqaalaha waynaha Madaarka caasimada ee cigaal internatioal airport.
Waxa shaqaalaha la abaal mariyay waax walba kuwii ugu dadaalka iyo shaqada wanaagsanaa sanadkaas dhamaanaya ee 2016 Waxay ahayd talaabo wanaagsan oo shaqaalaha iyo dadwaynuhu soo dhaweeyeen in la maamuuso cida mutaysatay waa arin ku yar dalkeena oo ay naadir tahay in la qabto
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 5:39 AM No comments:
Xadhig ka jarkii Qalabka Nasha
Taariikhdu markay ahayd 13/12/2016,w axa aanu xadhiga ka jarnay aniga iyo wasiirka wasaarada iyo maamulaha madaarka Hargeisa, qalab cusub oo shirkada Nasha ay ku soo kordhisay adeega ay u qabato madaarka.
Shirkada Nasha ka wasaarad ahaan Mudo dheer ayaanu ka codsanaynay inay horumariyaan adeega ay u hayso umada.
Doorkan way dadaaleen.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 3:20 AM No comments:
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:01 AM 1 comment:
Dugsiga Farsamada Gacanta ee M.Mooge iyo Yaboohii Wasaarada
Habeenkii Taariikdhu ahayd 25 Bisha 2016, waxaan ka qayb xaflad casho sharaf soo dhawayn ah oo loo sameeyay xubnaha qurba jooga ee ururka Samafalka ee Haldoor.
Ururkaasi waa urur samafal oo hawlo baaxad leh ka haya dalka, isla markaana ay ku midoobeen dhalinyaro firfircoon oo rag iyo dumar ba leh, dalka iyo dibadiisana jooga.
Waxa xaflada ka soo qayb galay acyaan badan, haday tahay cuqaal, aqoon yahan,agaasimayaal aan ku jiro iyo xubno kale oo bulshada magac iyo maamuusba ku leh.
Iskuulkan farsamada gacanta lagu baran doono ayay gacanta ku hayaan ururkani, oo lagu dhisayo lacag dhan $ 360,000 isla markaana uu wajigii koowaad dhamaaday.
Waxaan kaga balan qaaday goobtaas iyada lacag dhan $ 3000 anigoo ku hadlayay afka wasaarada duulista hawada iyo gaadiidka cirka JSL.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 3:33 AM 1 comment:
Ka qaybgalkaygii koobabkii ramadaanta ee Guryo samo iyo Maxamuud Axmed Cali
Maalintii Axada ee ay bishu ahayd 03/07/2016 iyo maalintii ku xigtay ee isniinta ee ay taariikhdu ahayd 04/07/2016 waxaan ka qayb galay labadii ciyaarood ee kama dambaysta ahaa ee ka kala dhacay labadaas garoon oo ay iskaga horyimaadeen afar kooxood oo isugu soo baxay ciyaarta kama dambaysta.
Garoonka guryosamo oo ahaa garoonkii aaan yaraantaydii ku soo tababartay ciyaaro badana ku ciyaaray, koobab badan aan ku qaaday, qaarna laygaga qaaday waxay ii ahayd xusuus gaar ah oo xiise leh.
Waxa igu weheliyay gudoomiye xigeenka koowaad ee xisbiga Kulmiiye Maxamed Kahin Axmed iyo Xoghaya golaha Dhexe ee Xisbiga Mustafe Waxdad.
G/xigeenka koowaad ee Xisbiga Kulmiye iyo Gudoomiye
Golaha Dhexe Iyo aniga
Sidoo kale waxa joogay agaasimaha guud ee Wasaarada dhalinyarada iyo Ciyaaraha iyo Mubarak taani oo ah Xoghayaha gaarka ah ee gudoomiyaha xisbiga Kulmiye.
Ciyaartii labaadna waxa ka soo qayb galay Wasiirka Xanaaada xoolaha Cabdilahi Maxamed Dahir Cukuse iyo Agaasimaha WDH& C iyo maamulaha madaarka, Cheif Caaqil Cabdirisaaq Maxamed Askar iyo Xildhibaan Maxamed Khadar Dahir.
Waxa labada garoonba xusuus lahaa dhalinyaro tacliiqinayay ciyaarta oo ku hadlayay Carabi, oo halkii Cisaam Shuwaali dhigay.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 9:34 AM No comments:
Mamnuucidii soo dhawaynaha madaarada dalka
Maanta oo ay bishu tahay 27/04/2016, waxa wasaarada duulista iyo hawada somaliland ay mamnuucday gabi ahaanba soo dhawaynihii iyo sagootintii lagu samayn jiray madaarada dalka , gaar ahaana masuuliyiinta dalka iyo mudanka reer somaliland.
Waxaanu shir jaraaid ku qabanay gudaha madaarka caasimada aniga iyo wasiiru dawlaha wasaarada Axmed nuur Faahiye iyo wasiirka wasaarada Omar sheikh maxamed faarax ( Cumar yare ).
Waxaan ka jeediyay khudbada qaybta furitaanka oo ah tan hoosta ku lifaaqan.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 12:55 PM No comments:
Dugsiga Farsamada Gacanta ee M.Mooge iyo Yaboohii ...
Ka qaybgalkaygii koobabkii ramadaanta ee Guryo sam...